CEH v10 Yini okusha? I-Certified Hacker Certification V10
I-CEH v10 yamemezela, i-Ethical Hacking Course
Yini entsha ku-CEH v10?
Yini i-CEH ewusizo?
Ngingathatha kanjani i-CEH v10?
EC-Council ibike i-CEH v10 - ukukhululwa kweshumi kwesitifikedi esiqinisekisiwe se-Certified Ethical Hacker.
Ihlukaniswe phakathi kwezinye izibuyekezo ezinhle kakhulu ekuqaliseni i-pile engenakwenzeka ye-cyber capacity webinar, i-CEH v10 ibonisa enye ingxenye yesitifiketi njengoba ihlose ukugcina isimo sayo njengesitifiketi esihle kakhulu sezwe sokuziphatha.
I-CEH ibuyela emuva ku-2003 futhi ivuselelwe njalo ukuqonda ukuthuthuka. Njengesibuyekezo, isitifiketi se-CEH saqeda ukuvuselelwa ku-2015, ngokuthunyelwa kwe-CEH v9. Lokhu kuvuselela kwandise inani lamamodeli ku-18 futhi linikeze ukukhanya okuvelele kakhulu kumakhompuyutha asatshalaliswe.
Vala amanye ama-EC-Amalungu asebenzayo, i-Firebrand iya ku-webmart yokumemezela ukuze inike amandla ethu okuqala ukuba athathe i-gander kulezi zibuyekezo ezibucayi.
EC-Council iqhubeka nokuvuselela i-CEH ukuhlangabezana nezicelo zamabhizinisi emhlabeni jikelele. Yilokho okusha ku-CEH v10:
Imodi ye-intanethi ye-Inthanethi ye-Things (IoT) yokuphepha
Ukuhlolwa kokubuthakathaka okubuyiselwe kabusha
Ukugcizelela ama-vectors e-cloud attack, i-AI ne-Learning Machine
Isethulo se-CEH esiwusizo
Ngenxa yengozi yokukhulisa amakhegi we-IoT angavikelekile - njengo-2017's Mirai botnet attack - i-CEH v10 izoletha enye imodemu ekugxilwe kwi-Intanethi yezokuVikela (IoT).
Le module izonikeza ochwepheshe ngolwazi okumele bahlolisise ngalo, bathumele futhi bahlangabezane nokuphepha kwezinto ze-IoT.
Ifomu elisha le-CEH lizoletha nokubuyekezwa kokungena amandla okuhlolisisa okuqukethwe. Ukuhlola okungenakuzivikela kuyisici esiyisisekelo sokujikeleza kwempilo yokuphila futhi i-v10 izokwandisa ukukhokhelwa kokusetshenziswa kobuthakathaka bokuhlolwa ebusweni obuqotho. Ukucindezeleka kuzohlanganisa amadivaysi adingekayo ukuze ahlaziye izinhlelo, izinsimbi ezisetshenzisiwe abaduni kanye nendlela yokuxazulula izinkinga.
Ochwepheshe bangalindela i-spotlight eyandisiwe kuma-vectors ahlaselwa, afana nokuthuthukiswa kwamafu, i-AI nokufunda komshini. Ukuhlukunyezwa kuzothuthukisa ukucabangela i-AI ne-Machine Learning ukuqondisa ukuhlolwa kokungabi namandla ngenhloso yokuphela yokuqapha ukuhlaselwa kwe-malware.
I-CEH v10 izokwazisa ngokufanayo nezinqubo zokuphenya nge-malware - inqubo yokunquma ukusiza, indawo yokuzalwa kanye nomphumela we-malware ngokuqaphela.
Ukuhlolwa okusha kwe-CEH kugcina inhlangano engaqondakali kusukela okhokho bayo:
Inani lemibuzo: 125
Isikhathi sokuhlola: Amahora we-4
Ifomethi yokuhlola: Ukukhetha okuningi
Ukudiliva kokuhlolwa: ECC EXAM, VIEW
I-Exam Prefix: 312-50 (ECC EXAM), i-312-50 (VUE)
I-Certified Hacker (Ewusizo) i-Certified Hacker (Okuwusizo) ukukhuliswa kwesitifiketi se-CEH. Ukuhlolwa okungeziwe nokuqondisisa, okufinyeleleka kumncintiswano okulindele ukubonisa ulwazi lwabo oluwusizo ngokusebenzisa izimfanelo ezifundiswe ngaphakathi kwe-CEH kwisinselelo sokuphepha esiqinisekisiwe.
Uma kungenzeka ukuthi ube ne-CEH, uzokwazi ukuhlala ukuhlolwa kanye ne-EC-UMkhandlu ukuphakamisa lokhu kuzohlola amaphuzu okuvalelwa kwamakhono abo angaphansi kwe-understudy. Ukuhlolwa okuwusizo ukuhlolwa kwehora eli-6 okuhloswe ukulingisa inethiwekhi yangempela yezinkampani ngokusebenzisa imishini ebonakalayo ephilayo, amanethiwekhi nezinhlelo zokusebenza.
Ukuhlolwa kwe-CEH okuwusizo kuhlukile kokuhlolwa kwe-CEH okwamanje futhi kuwumnyango ovulekile wezinkinga zokuqhubeka nokuthuthukisa ukuqonda kwabo. Ukufiphala nge-test this test, kuzomele ukuthi:
Khombisa ukuqonda kwama-vectors wokuhlaselwa
Yenza ukuskena kwenethiwekhi ukuze ubone imishini ebukhoma futhi esengozini kwinethiwekhi.
Yenza ukukhishwa kwe-OS banner, ukuphatha, kanye nokwaziswa kwamakhasimende.
Yenza ukukhwabanisa kohlaka, i-steganography, ukuhlaselwa kwe-steganalysis, kanye namathrekhi okumboza.
Qaphela futhi usebenzise izifo, izimpethu zekhompyutha, kanye ne-malware ukuze usebenzise izinhlelo.
Yenza ipakethe idlwengula.
Khombisa ukuhambisana kwe-server yewebhu kanye nokuhlaselwa kwesicelo sewebhu kufaka phakathi isiqondisi sokungena, ukuphazamisa i-parameter, i-XSS, njalonjalo.
Yenza ukuhlaselwa kwe-SQL ukumnika.
Yenza izinhlobo ezihlukahlukene zokuhlaselwa kwe-cryptography.
Yenza ukuhlolwa okubuthakathaka ukuze ubone izinhlaka zokuphepha zokuphepha ezikhungweni zenhlangano yezinhloso, izinhlelo zokuxhumana nezinhlelo zokuphela
I-CEH Amaphuzu okuhlola okusebenzayo anentshisekelo yilezi:
Inombolo Yezinselele Eziwusizo: 20
Ubude: amahora we-6
Ukufinyeleleka: I-Aspen - iLabs
Ifomethi Yokuhlola: I-Cyber ​​Range ILab
Amaphesenti okudlula: 70%
Ngenkathi ungakwazi ukulwa nokufeza i-CEH v10 okwamanje, ITS manje uhambela ukujoyina izinhlelo ezintsha zemfundo ezifundweni eziphuthumayo ze-CEH. Hlala ubukele usuku lokukhishwa olusemthethweni lwe- CEH v10.
Kungani kufanele uthole isitifiketi se-CISSP?